Owuwu Owuwu Ogiri Ugwu Akwa
Home / Faucets kichin / Ikpokoro efere Faucets / WOWOW Mgbidi Ugwu ite ite kichin
gosiri 5.00 nke 5 dabeere na 26 ahịa Fim
(26 ahịa reviews)
Ọdịdị kichin dọkụ dị elu karịa stovu Ọdịdị zuru oke bụ nkecha ma dị mfe.
Ọdịdị chrom-steel na-eme ka pọpuet ahụ dị mma.
Nke a mara mma ma dị mfe ite ndochi faucet 2311300C elu elu counter, na spout akụkụ nwere ike na-atụgharị 360 ogo iji gboo mkpa mmiri nke ọ bụla akụkụ, na-eme ka mmiri kichin ọzọ adaba. Ihe ngosi nke uzo ato bu ihe adiri nma karie nkuku nile, ma tinye otutu uto ndu. Uczọ a dị mfe eji eme nri kichin na-agbakwunye mmetụta mara mma na emetụ nke kichin.
Ogologo mmiri dị obere nke dị obere: nke a jiri ọla kọpa siri ike, na-adịgide adịgide na ndụ ogologo ọrụ; brushed nickel gama, mgbochi corrosion, ọ dịghị mfe ịhapụ akara mkpịsị aka, dị mfe ihicha; tube ọla nchara siri ike, mmiri na-agbaze ma na-egbochi corrosion; chepụta patent na minimalistic, adabara maka imepụta ụdị ụlọ ọgbara ọhụrụ
Ọrụ na-agbanwe agbanwe, Nchekwa oghere: usoro nkwonkwo okpukpu abụọ, ntụgharị ogo 360, na-agbanwe iji; ihe eji eme ka valve abuo maka njikwa mmiri uzo abuo, odi mfe iji rụọ ọrụ; chekwaa ohere zuru oke maka stovu dị warara
Nnukwu lowgbọ mmiri, Mmiri Na-akwụsi Ike: Neoperl ABS onye na-eweta mmiri, na-enye mmiri iyi dị larịị nke ọma, na-ezute ngwa ngwa ite na-ejuputa, ihe mgbawa; nchekwa ịdị ọcha mmiri: arụ ọrụ seramiiki seramiiki a rụrụ n'ime ya iji hụ na ọ dịghị mkpọda mmiri ma na-eduga na-enweghị ntụpọ
American Standard Size, Quality Installation Parts: 1/2 "NPS - 1/2" NPT American standard connector, kwesịrị ekwesị maka ụdị kichin ọ bụla, dị mfe ịwụnye; German Fisher nylon arịlịka, ogo dị elu ma na-adịgide adịgide
Nnọchi afọ 90 n'efu, akwụkwọ ikike afọ 5, 7/24 Nkwado ndị ahịa; ọ bụrụ na ọ dị mkpa, biko kpọtụrụ anyị ❤service@wowowfaucet.com
Mgbe ejighi ya, enwere ike apịa ya na mgbidi iji chekwaa ohere, nkedo ọla kọpa siri ike, njikwa nke mmiri ọkụ na mmiri oyi, mgbaze ọkụ na-agbazere ọkụ dị elu, ngwa zuru oke, ị nwere ike iwunye ya n’enweghị ịzụta.
SKU: 2311300C Categories: Faucets kichin, Ikpokoro efere Faucets Tags: Nickel azọrọ, Brass siri ike, Ncha
13.56 x 7.24 x 1.42 sentimita
Mgbanwe Degree 360, nkwonkwo ugboro abụọ, mpịachi
Ọnụ ọnụ, mara mma, nke ọma. Leak n'efu, ma dabara nke ọma na kichin anyị megide ikuku gas na-enweghị nchara na ọdụ ụgbọ oloko na-acha ọcha nke nwere oche osisi ọcha.
M hụrụ n'anya otú ngwaahịa anya, na udo nke ịwụnye, na nkwado na ajụjụ site na Nkwado Ahịa.
M ga-azụta ngwaahịa a ọzọ wee kwado enyi m ngwaahịa a.
Ọ dị ezigbo mma na kichin anyị Reno. Mfe iji wụnye na-arụ ọrụ nke ọma. Osisi ite na-esiri ike ịchọta ebe a na Ottawa Canada na mgbe ịchọtara ya, ọ karịrị ọnụ ahịa. Ọnụahịa dị na nke a bụ eziokwu. Ezigbo onye ahịa.
Na-ele anya nke ọma na 36 ″ gas stovu na kichin ọhụrụ anyị! Ọ bụ ezie na anaghị eji ya kwa ụbọchị, ọ dị oke aka mgbe ọ dị mkpa. Ntuziaka nwụnye dị ukwuu ma mee ka ọrụ ahụ dị mfe. Ezigbo mma na uru maka ọnụahịa ya mere m kwadoro ya.
Anyị ejirila ihe a otu afọ na ọkara. Enweghị mgbapụ, njedebe dị mma dị ka nke ọhụrụ, na valves ka na-agbanwe agbanwe. Nnukwu mmiri dị elu ma e jiri ya tụnyere ọkpọkọ kichin anyị, nke bụ ihe mara mma.
Enwere m afọ ojuju ozugbo WOWOW ji ngwaahịa mbụ mechie ngwaahịa adịgboroja m. Ọ bụ ọdịdị dị elu, ọ dị oke egwu ma kwekọọ na kichin kichin m nke bụ akara dị iche.
Lọ ọrụ a dị oke mma, na-enwe mmetụta dị ukwuu ma anaghị ehi ehi. Ọ dị oke mma na kichin anyị ka anyị nwee ụdị ihe atụ ọ dịkwa mfe maka ndị ọrụ anyị ịwụnye. Ihe esere foto ole na ole iji gosi otu arụnyere. Nke a bara nnukwu uru ma e jiri ya tụnyere nkeji dị ọnụ karịa.
N'inwe mmetụta na ọdịdị dị mma nke ite ite a. Kpamkpam devine. Sie ike ịkwado ya.
Ebe ọ bụ na anyị nwere ngwa ndakwa nri n'elu stovu elu, nkwekọrịta kọmpat nke ite ite a dị ezigbo mkpa. Ọ rụpụtara nnukwu. Elu iji jupụta nnukwu ite, ma ka na-adaba n'okpuru microwave. Echichi were obere mbọ mee ka ọ ghara ihie mmiri na nkwonkwo ọkpọkọ, mana ugbu a ọ na - arụ ọrụ ọfụma ma anaghị efukwa ya.
ọ dị oke mma na kichin ndị ọzọ n'oge nrụzigharị. Ndị ọrụ ngo wụnye 2 × 4 n'azụ mgbidi iji hụ na ọkpọkọ mmiri a ka siri ike mgbe ọ bụla anyị mere ya. Ka ọ dị ugbua adịghị ntapu ma sie ike ma dịkwa mfe iji. na-ewetara ezigbo iyi mmiri.
Zụtara nke a ọtụtụ izu gara aga na ọ na-arụ ọrụ zuru oke! Ike gwụchara m etu ọ ga-esi rụọ n'ihi etu ọnụ ya si dị ọnụ mana ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu! Ọ fọrọ nke nta ka m zụta otu okpukpu anọ dị ka nke a ma dị m ezigbo obi ụtọ na anaghị m! Odi ohuru na kichin ohuru m!
Nnukwu ite-esp maka ego ahụ. Echere Id nyochaa na eserese mgbe ị nyochachara nyocha ndị ọzọ niile na eserese nke nyochachara.
Yiri ka o siri ike. Na-arụ ọrụ. Mmiri nwere ike ịgbatịkwu mma. Ma ya mma dị ka ọ dị.
Adọpụrụ m iche ma tinyekwuo silicone lube na o-yiri mgbaaka na ogwe aka na-akọwapụta. Yiri ka o-mgbanaka dochie anya ga-abụ ezigbo mfe kwesịrị a ihihi ịzụlite e.
Wụnye dị ntakịrị ihe. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịkụnye ihe mkpuchi ss bras nke bịara na potfiller. Ihe nzuzu dị ọcha. Ebe ọ bụ na m na-atụgharị n'ime 1 1/2 sentimita asatọ nke 2 × 4 (lee eserese), apụpụtara m obere ọkụ ahụ ma dochie mma wiwi nke seramiiki. Nnọọ mgbodo wụnye.
Ebe ọ bụ na amaara m na ejiri eriri 2 × 4 kpuchie eriri mmiri ahụ na mgbidi ahụ, ọkpụite ahụ siri ike (lee foto) M tụgharịkwara ihe na-agwụ ike, nke jọgburu onwe ya, nke gosipụtara ihe nkedo na ọkpọkọ ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mkpa, na naanị silicone kpaliri ewepụtụ ibe na mgbidi- mgbodo. Ọtụtụ ihe na-edozi karịa nke ekpughere.
Ngwunye m nwere uru nke m maara banyere mgbochi / ọkpọkọ ụfụ nke mere ka ọ dịrị m mfe ịhapụ ihe nkedo. O nwere ike ịbụ ihe kachasị mma iji njiri mara mma nke gosipụtara ma ọ bụrụ na ị maghị ihe dị na mgbidi.
Obi dị m ụtọ na ọrụ ọkpụite na ọdịdị ya dị ka ihe siri ike ma dịgide
Zụrụ ite a na-ehichapụ iji dochie m ọkpọ mmiri kichin ochie. Ihe mere m ji họrọ nke a bụ maka ọnụ ala na ọ dị mma iji ahụmịhe maka m. Enwere ike ịgbanye pipụ mmiri 360-ogo zuru oke ma kwesịrị iru ọtụtụ mpaghara anyị chọrọ ya (ọ bụ ezie na anyị achọghị ogo 360 maka iji ya eme ihe.) Ọ dịghị m mkpa iwepu ite dị arọ site n'otu ite mmiri gaa na stovu m ọ bụla ọzọ .Nice gbalịa mgbe ọ bụla!
Ọ dị ezigbo mma ma sie ike. Nwere nnọọ classy ọgaranya anya. Ahụrụ m ya n'anya na kichin m. Ka anyị lee oge ọ ga-ewe.
Ezigbo oke ọkpọ ọkpọ maka iji kichin kichin m. mgbe a na-agbanye n'akụkụ ọ bụla, ọkpọ mmiri na-eduga mmiri n'ime ọkwá dị n'èzí, ma ọ ka dị mkpụmkpụ nke na ị gaghị enwe ike ịbanyefe nnukwu efere ahụ n'ọnọdụ ọ bụla. Ejiri ezigbo ọsọ na-eju efere anyị mgbe a na-enye mmiri zuru ezu.
Dị mfe ịwụnye. Ga-ehicha omume ọma mgbe e mesịrị mgbe ruru unyi, ole na ole cracks ti zoo griiz na nri. Nice mara mma, wepụrụ ya ma nwee ntụle dị mfe iji dochie mgbe emechara. Jiri akwa akwa ma ọ bụ eriri eriri iji chekwaa imecha mgbe ị na-etinye. Use na-eji swinging Ogwe maka leverage mgbe tightening !!!
Anyị na-emezigharị kichin anyị dum ka m wee chee na nke a ga-abụ otu oge na oge iji wụnye ite ite ma ọ bụrụ na achọrọ m. Wụnye dị ezigbo mfe, m gbara 1/2 ”ọla kọpa kwụ ọtọ ma kpuchie ya na mgbidi ahụ. Ogo nke ọkpọkọ yiri ezigbo, niile metal ewu. Oge ga - egosi ogologo oge mana ọ dị mma nke ọma naanị izu ole na ole. Ọ bụ ihe dị mma igosi ndị ezinụlọ / ndị enyi n'ihi na amaghị m onye ọ bụla ọzọ nwere ite ite.
Nkume siri ike. Amaghị m ihe ọzọ ị ga - achọ? Azụtara m dị iche na mbụ na enweghị m ike itinye ya n'ihi eri. Nke a zọpụtara ụbọchị ahụ. Super mfe wụnye na ezi mma unit.
Igwe mmiri a na-eche nke siri ike, ọ naghị adị ka ọkpọka DELTA ndị na-abụkarị plastik, nke a yiri ka ọkpọkọ ígwè zuru ezu. Na-ele anya na ọ dị mma. Ruo ugbu a anyị nwere obi ụtọ na ya.
Nke mbụ, anyị na-eji ya karịa ka anyị chere, n'ihi na anyị tinyekwara ya na Ngalaba Osmosis, n'ihi ya, anyị nwere ike jupụta ite na mmiri dị ọcha wee jupụta ite mmiri na karama. Ọ dị mfe ịjupụta maka ofe ma sie akwa sie sie. Anyị na-eji ya kwa ụbọchị. Ọ dị mma karịa stovu anyị!
Onye ọrụ m ji kwenye n’ezie ka anyị tinye ite ite mgbe anyị mezigharị ọnwa gara aga. Amaghi m ihe ite ite bu. Kemgbe ịwụnye, amaghị m otu esi esi nri na-enweghị otu. Ọ dị ezigbo mma! Ọ dị m ka ya bụrụ na onye mụ na ya rụ ọrụ kaara mma ịnọ n'ọnọdụ mgbidi. Ọ dị ntakịrị ntakịrị.
Na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa. Anyị na-akpachara anya na ya yabụ echeghị m na ọ ga-esi ike ma ọ bụrụ na ị kwatuo ya. Ma ọ naghị ehi ehi, dị mfe ịbanye ma pụọ, anaghị eburu ton nke oghere, dị ọnụ ala, jupụta ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị gbanye ya n'elu, ọ na-asụ ntakịrị na mpụga isi iyi mana ọ nwere nnukwu nrụgide ọbụlagodi na agbanyeghị mgbawa zuru oke. Hụrụ ya n'anya.
M hụrụ n'anya ihe niile banyere ngwaahịa a! Anọ m na-eche ruo otu afọ ka m nwee otu mana enweghị m ike ịchọta anya ziri ezi ruo mgbe m hụrụ nke a. Mara mma ngwaahịa. Na-arụ ọrụ zuru oke na m na-eji ya mgbe
Ibu na ogo ngwaahịa a dị ịtụnanya. Azụtara m ọkpọkọ mmiri dị elu nke ukwuu maka ebe m na-asa mmiri na ite ite a dị ka ọ bụ ibe ibe (maka ọtụtụ narị obere). Kpamkpam kwadoro!
Igwe mmiri a dị ịtụnanya! Ntinye ngwa ngwa ma di mfe. Ọrụ sprayer bụ ihe a na-apụghị ikwenye ekwenye na njedebe ahụ dị mma ma ga-enye nkwalite ozugbo na kichin ọ bụla. M maa nwere ike ikwu!
Ọ dị oke mma na stovu. Ọrụ dịka o kwesiri. Ọ na-erute ndị na-ere ọkụ niile. Obi dị m ezigbo ụtọ.
WOWOW abụọ jikwaa kichin fucet na akụkụ ịgba ...